“ဖုတ္” ၀င္တယ္ဆိုျပီး ေသတဲ႔ အေမအိုတစ္ဦးရဲ႕ အေလာင္းကိုရင္ခြဲရံုမွာစစ္ေဆးၾကည့္လိုက္ေသာအခါ…. - POPPIN NEW
July 12, 2019 ဗဟုသုတ
” မသိလိုက္ေသာ ပဥၥာနႏၲရိယကံ ”
တကယ္ဖုတ္မဟုတ္ဘဲ မိဘအရင္းကို ဖုတ္ထုတ္တယ္ဆိုၿပီး ကိုယ္တိုင္ပဲ လုပ္သည္ျဖစ္ေစသူတစ္ပါးကိုလုပ္ခြင့္ ေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယ္တိုင္မသိလိုက္ေသာပဥၥာနႏၲရိယကံၾကီးထိုက္ပါတယ္။
” မသိလိုက်သော ပဥ္စာနန္တရိယကံ ”
တကယ်ဖုတ်မဟုတ်ဘဲ မိဘအရင်းကို ဖုတ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်သည်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုလုပ်ခွင့် ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်သောပဥ္စာနန္တရိယကံကြီးထိုက်ပါတယ်။
ဒီအနေအထားက သားသမီးတွေငြိုုငြင်ရုံတင်မက မြန်မြန်ပင်သေစေချင်နေပါပြီ။ ကိုယ့်အညစ်အကြေးကိုတောင် ကိုယ်တိုင်မစွန့်နိုင်တော့ဘူး …။ပြုစုတဲ့သူတွေကရွံတတ်တော့ ပိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အဖိုးအဖွားတွေက အသက်သာကြီးတာ ဝမ်းမီးက​ကောင်းတုန်း။အိပ်ရာထဲလဲနေပေမယ့် အစားကို ကောင်းကောင်းစားနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုအစားဝင်နေတာကိုဘဲ မသိနားမလည် ဆရာဝင်လုပ်တဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်က “ဖုတ်ဝင်နေပြီ” တဲ့။အသက်ကကြီး ရောဂါက နာတာရှည် ပြုစုရတာကြာလာ​တော့ သားသမီးတွေ ​စေတနာပျက်လာ ပြီလေ။လူကြီး လူမမာဆိုပြီး ​ကျွေးတာကနည်းနည်း ဆိုတော့ ညသန်းကောင်အချိန်ရောက်တော့ ဆာလာပြန်ရော။ ကျွေးတုန်းက မဝသေးဘူးဆိုပြန်တော့ အစားများရင် ချေး(ချီး)ထွက်မယ်ဆိုပြီး ပန်းကန် သိမ်းသွားတယ်လေ။
သူတို့ကြွေးတာ စား​နေရတဲ့ ဘဝဆိုတော့ ထပ်ပြီးမပြောရဲ တော့…ငြိမ်နေလိုက်ရတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အဖိုးအဖွားနေရာ​ရောက်ရင် အဲဒီဒုက္ခတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သားသမီးတွေ အိပ်ကုန်ပြီအထင်နဲ့ ဗိုက်ကလည်းတအား ဆာလာတာ​ကြောင့် …သားသမီးတွေကိုလည်း မနှိုးရဲတော့ ဖင်တွန်းဖင်တွန်းနဲ့ မီးဖိုချောင်ဆီကို တရွေ့​ရွေ့…..
အဲဒီအချက်ကဘဲ ဖုတ်ဝင်နေပြီလို့ စွပ်စွဲစရာဖြစ်သွားတယ်။ ဇရာဒဏ်/ရောဂါဒဏ်ဖိစီးနေတော့ ​ကြောင်အိမ်ကိုအားပြုု ပြီး တဖြည်းဖြည်းထလိုက်တယ်။ ဖေးမမယ့်သူမရှိဘူးဆိုတဲ့ အသိကြောင့်သာ အားတင်းပြီး ရပ်နိုင်တာ။​ဖေးမမယ့်သူ တစ်ယောက်လောက်တွေ့ရရင် ချက်ချင်းလဲကျသွားမှာအမှန်ပါ။
အဲဒီအချိန် မသင်္ကာစိတ်ဝင်နေတဲ့ သားသမီးတစ်ယောက်က မီးဖိုချောင်မှာအသံကြားတာနဲ့ ထလာပြီးလာကြည့်တဲ့အချိန်။ ကြောင်အိမ်ထဲတွေ့တဲ့ငါးဟင်းကို ယူစားနေတဲ့ အ​မေအိုကိုတွေ့လိုက်တော့ .. အိပ်ရာပေါ်က မထနိုင်တဲ့ လူမမာ ဘယ်သူမှမသိအောင် သန်းကောင်အချိန်မှာ သူ့ဟာသူ ထစားနေတာဟာ ဧကန္တဖုတ်ဆိုု တာများလား…?
အဲဒီအချိန်မှာ….“အမေဘာလုပ်နေတာလဲ”လို့ မေးရော …..သားသမီးကိုရုတ်တရက် တွေ့လိုက်ရတဲ့အမေအိုဟာ ငါ့ကို ဖေးမပေးမယ့် သားရောက်လာပြီဆိုပြီး အားကိုးတဲ့အနေနဲ့ တင်းထားတဲ့စိတ်ကို ​လျှော့ချ လိုက်တာနဲ့ ​ခွေကနဲလဲကျသွား တော့တယ်။
ဒါကိုဘဲ လုနာမှာဝင်ပူးကပ်နေတဲ့ ဖုတ်က ဆရာရဲ့စက်ဖြတ် ဆေးတော်ကြီးရဲ့အစွမ်းကို ဘယ်ဖုတ် အမျိုးအစားမှမခံနိုင်ပါဘူးဆိုပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား​နေတယ်။ တစတစနဲ့ လူနာအမေအိုရုန်းကန်လူးလွန့် နေရာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ်။ ရက်ရှည်လများ လူနာမှာစွဲကပ်ပြီး ညာစားနေတဲ့ ဧရာမနောက်ဆုံးအဆင့် ဖုတ်ထွက်သွားပါပြီ။
အဲဒီမှာ ကျေးရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ ့ကျောင်းဆရာလေးက ဒီဖြစ်စဉ်ကို မကျေနပ်တာနဲ့မြို့ကသူ့သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားတော့ ဆရာဝန်က အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာစစ်ဆေးလိုက်တော့မှ အဖြေပေါ်တော့တယ်။ လားလား အောက်လမ်းဆရာရဲ့ စက်ဖြတ်ဆေးက အစွမ်းထက်မှာ​ပေါ့…ကြွက်သတ်ဆေးတွေ ဖြစ်နေတာကိုး တိုတိုပြောရင် အောက်လမ်းဆရာကလည်း လူသတ်မှုနဲ့ထောင်ကျ သွားတယ်။
တိုတိုပြောလို့မရတာက ပဥ္စာနန္တရိယကံကို ကျူးလွန် လိုက်​တဲ့ သားသမီးတွေ သိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မသိလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကံအတွက် ​ပေးဆပ်ရမယ့် အပြစ်ကြွေးက မသေးဘူးဆိုတာ…သားသမီးတိုင်းသိနိုင်ကြပါစေ..
စာေမးပြဲေျဖဆိုေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဒီေက်ာင္းသူေလးလိုမျဖစ္ၾကရေအာင္ဂရုစိုက္ၾကပါ
Pop Pin New March 8, 2019